Abwaan Dhoodaan oo ku geeriyoodey dalka Itoobiya (Warbixin iyo Taariikhda Abwaanka ) – Radio Daljir
Abriil 26, 2013 10:28 b 0
Herer, April 26, Allaha u naxariistee waxaa maanta magaaladda Herer ee dalka Itoobiya ku geeriyoodey abwaankii caanka ahaa ee Cabdilaahi Macalin Axmed “Dhoodaan” oo ahaa hal abuur aad looga yaqaano geyiga Soomaalidu degto.
Abwaan Dhoodaan wuxuu ahaa suugaan yahan hodan ku ah curinta suugaanta noocyadeeda kala duwan, sida gabayadda, geeraaro, maansooyinka iyo suugaan isaga gaar u ah oo loo yaqaano Jacburka kaasoo ahaa mid aad loogu xasuusto abwaan Dhoodaan.
Taariikhda Abwaan Dhoodaan.
Abwaan Cabdilaahi Macalin Axmed “Doodaan” wuxuu ku dhashay Miyiga deegaanka Wardheer ee Dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadku markuu ahaa 1941 dii, abwaanku wuxuu ku soo barbaaray noloshii Miyiga ee uu ku dhashay oo xiligaasi dadka Soomaalidu u badnaayeen.
Dhoodaan wuxuu sugaan curinta bilaabay isagoo 16 sano jir ah, isagoo ka bilaabay curinta gabayadda, Geeraaradda iyo Ciyaarta dhaantadda oo uu aad ugu caan ahaa waayihiisii dhalinyaranimo ee noloshii baadiyaha.
Abwaanku wuxuu mudo badan ku noolaa magaalada Muqdisho, xiligii ay dalka ka talinaysey Dawladii uu hogaaminayey Jen Maxamed Siyaad Barre, markii ay buburtay Dawladii Soomaaliya wuxuu u baxay dalka Kenya isagoo mudo halkaasi ku noolaa.
Gabayadda lagu xasuusto Dhoodaan.
AUN Abwaan Dhoodaan wuxuu caan ku ahaa gabayo xigmadaysan oo eebe ku manaystay inay kasoo maaxdaan maskaxdiisa waxaana gabayadiisa inbadan oo kamid ah uu kusaleeyn jirey maahmaahyada Soomaalida taasoo abwaanku uu kaga duwanaa inta badan abwaanadda Soomaalidda.
Abwaanka gabyada lagu xasuusto ee soomaalidu aad ka ugu taqaano waxaa kamid ahaa, Alle Tuug, Likaaco, Aweetii, Garnaqsi, Jilboriiq, Jeeraaro, Ogaysiis,Qalbikarbaash, Tusaale, Toosoo Kacaay, Xaawo iyo Aadan, Isweydiin, Higlo & Halgaad iyo gabaygii caan baxay ee Jacbur la magac baxay kaasoo Abwaanka aad loogu bartay qofkastaana ku xasuusto. ereyadii gabayga Jacbur ee qosolka iyo maada ku salaysnaa waxaa kamid ahaa.
Haddii kii xumaantaa ku falay weliba maad maago
Sidii laba digaag sow ilkaa layska cuni maayo
Abwaanku mar uu ka hadlayey arimaha Jacaylka oo uu ku cabiray gabayga Jacburka wuxuu tiriyey gabay qosol badan oo Jacbur ah oo ay kamid ahaayeen.
Anigaba dharaarahan qalbigu waa i ruxmanayaae
Gabadh meel maraysey baan rabaa inaan jeclaadaaye
laakiin nin baa i waalayoo ii durbaan tumaye
Wuxuu yidhi hadaad caashaq tahay dheefta wada diide?
aniguna runbaan moodayee kama dhegaysteene
maantiyo shalaytiyo doraad waanigii qadaye
baahidii i haysaan ka baqay inaan hunqaacaaye
Saaxiibkiisa mooyee anuuba gaajo ii dilaye?
Ninkaa inaan Budheeyaan damcaye Caawa ilaraadi,?
Waa qayb kamid ah gabaygii jacbur oo abwaan Dhoodaan AUN uu kaga hadlay arimaha Jacaylka oo xiligii uu gabaygan curiyey aad ugu badnaa suugaanta lagaga hadlayo.
Waxaa xusid mudan in xiligaas oo ku beegnayd qiyaasta intii ?u dhaxaysey sanadihii 1970 ilaa 1980 maadkii ay aad u badnaayeen sugaanta dabagalkeeda iyadoo xiligaasi Dawladii Milateriga ahayd ay faafreeb ku samaynjirtey sugaanta wixii ay u aragto inay ka dhan yihiin.
Abwaanka ayaa mar uu ka hadlayey Gabayga Jacburka ah ee uu kaga hadlay arimaha Jacaylka ayuu sheegay in ula jeedadu aysan ahayn waxa uu ka hadlayo balse uu xambaarsanaa xigmad ka culus oo ku aadan sida dadka sugaanta curiya loogu mashquuliyey arimaha Caashaqa oo aysan waxkale uga hadli karin, wuxuuna abwaanku sheegay in gabaygan uu ku bahdilayey arimaha Cishqiga lagu sheegay ee xiligaas wadanka haystey.
Iskusoo wada duuboo Abwaanka ayaa sanadihii u danbeeyey ku noolaa magaalada Jigjiga ee Dawlad Deegaanka Soomaalida caasimadda u ah, waxaana maanta soo dhamaatay noloshiisii aduunyo, isagoo sanadkan jirsadey 72 sano.
Kulan looga hadlayo adkaynta Amniga oo lagu qabto degmada Qardho